Kooxaha Manchester united iyo Juventus oo laga cirib tiray Champions league halka kooxaha Barcelona iyo Ajax ay u gudbeen wareega xiga +Sawiro – Gool FM
Kooxaha Manchester united iyo Juventus oo laga cirib tiray Champions league halka kooxaha Barcelona iyo Ajax ay u gudbeen wareega xiga +Sawiro
Bashiir April 16, 2019
( Yurub) 16 Abriil 2019 Kooxda Barcelona ayaa cashar u dhigatay Kooxda Manchester United kulanka lugta labaad ee wareega sideed dhamaadka tartanka Champions League kaddib markii ay kaga adkaadeen 3-0 balse wadajir labada kulan waa tiro 4-0.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana la ar kayey Kooxda Barcelona oo la wareegtay gabi ahaanba kulanka.
United ayaa ku soo gashay ciyaarta bilowgii hore dar dar xoogan balse wax walba waxaa soo gaba gabeeyey Messi daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta kaddib markii uu gool cajiib ah daba maraiyey shabaqa Kooxda Manchester United.
Ciyaartoyda Manchester United oo la niyad jabsanaa goolka laga dhaliyey ayaa mar kale madaxa hoos aadiyey kaddib markii uu Messi gool lama filaan ah ka dhaliyey gool haye De Gea natiijada ciyaarta ayaana noqotay 2-0.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa waxa uu ku dhamaaday 2-0,nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Gabalkii Manchester ayaa dhacay kaddib markii laga dhaliyey goolkii sedexaad ee ciyaarta daqiiqadii 61-aa ciyaarta waxaana goolka u dhaliyey laacibka reer Barazil ee Coutinho kaddib caawin uu ka helay dambeedka daafaca bidix ee Alba.
Ugu dambeen kulan ciyaareedka ayaa ku soo dhaamaaday 3-0 oo ay ku awood sheegatay Kooxda Barcelona oo gaartay wareega afar dhamaadka tartanka Champions League.
Dhica kale kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Juventus iyo Ajax ayaa ku soo dhamaaday 2-1 oo ay ku badisay Kooxda reer Holand ee Ajax, juventus ayaa gabi ahaanba laga masaxay tartanka Champions League.
Qeebtii koowaad ee kulanka ayaa ku idlaaday 1-1 juventus waxaa goolka u dhaliyey Ronaldo halka kooxda Ajax goolka bar-baraha aya ka heleen van de Beekbalse.
markii dib la isagu soo laabtay ciyaarta qeebtii dambe Kooxda Ajax ayaa la timid goolka guusha ee ciyaarta, kooxda Juventus ayaan gabi ahaan isaga hartay tartanka Champions League.
Son Heung-min oo 130,000 oo dollar ugu deeqay dad dhibaneyaal u noqday dab kacay
Klopp oo si RASMI ah u magacaabay liiska xidigaha kooxda Liverpool ee kaga qeyb galaya kulanka caawa ee Porto